I-Jelly Candy Depositise Umphakeli Womlilo | I-yinrich
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Jelly Candy Production Line > Ulayini we-Jelly Candy wokufaka
Le khasiUlayini we-Jelly Candy wokufaka Ingabe imishini ye-confectionery esetshenziselwa ukwenza osayizi bekhwalithi ephezulu, ehlukile, nemibala eminingi ye-jelly candy (QQ Pipi). Umugqa wokufaka i-Candy Deapity ungomunye womshini owenziwayo we-Gummy, ongasetshenziselwa ukukhiqizwa kwezinto ezahlukahlukene zejelly ezinjenge-gelatin, i-pectin, i-carrareenan, njll Igcina isikhathi, umsebenzi kanye nesikhala, kepha futhi inciphisa izindleko zokukhiqiza zenqubo yokukhiqiza ye-gummy.
I-Yinrich inguchwepheshe we-Jelly Candy ofaka abahlinzeki bomugqa, inemishini ehlukahlukene ye-confectionery, njengomshini we-gummy bear uyathengiswa. Imishini yokukhiqiza ye-gummy bear eyenziwe yi-yinrich ingaqhubeka ngokuqhubeka ikhiqiza uswidi onemizwa enobumba obuhlukahlukene obukhona ngaphansi kwezimo eziqinile zokuhlanzeka. Umugqa wokufaka i-Candy Deapititing Line yimishini ekahle.
Umugqa wokufaka uswidi weJelly
Uchungechunge lwe-YINRICH's GDQ lwenzelwe ngokukhethekile ukwenza ama-jelly candies angafakwanga isitashi, umthamo kusuka ku-70kgs / h kuze kufike ku-500kgs / h. Amapaneli wokuthinta we-HMI wokusebenza okulula; Amaphampu wokulinganisa ngomjovo othomathikhi wemibala, ukunambitheka nama-asidi; Imigqa emibili enemigqa emibili, ulayini ophindwe kabili, ukugcwaliswa okumaphakathi, namaswidi ajwayelekile we-jelly angenziwa kulayini. Ukufakwa okuqhutshwa yi-servo kulawulwa uhlelo lwe-PLC.
Umugqa we-Jelly GDQ150 Jelly Ball ufaka amakhasimende ethu eVietnam
I-Yinrich Technology Professional GDQ150- umugqa webhola webhola le-Jelly yabakhiqizi bekhasimende lethu laseVietnam, ukunikezela kwe-Afterses SereiveIzimo ze-jelly zingaklama isikhunta esisha ukuze sihlangabezane nesidingo ngasinye se-spectiifc yamakhasimende.
Umugqa wokufaka uswidi we-GDQ Big jelly
Umugqa wokucubungula uyiyunithi ecwecwe ekwazi ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zama-candies anzima ngaphansi kwesimo esiqinile sokuhlanzeka. Kuyimishini ekahle ekahle engakhiqiza imikhiqizo esezingeni elifanele ngokulondolozwa kwababili amandla kanye nendawo okuhlalwa kuyo.Umugqa we-GDQ omkhulu we-Candy Depositing
I-GD50 - Isivivinyo sokuhlola somugqa omncane we-jelly uswidi / gummy ukukhiqizwa kweKhasimende laseFrance
I-GD50 - Isivivinyo sokuhlola somugqa omncane we-jelly uswidi / gummy ukukhiqizwa kwekhasimende laseFrance.
Umugqa wokukhiqiza we-GDQ300 wokugcwalisa i-Thailand
I-GDQ150 Jelly Candy Ukukhiqiza Umugqa we-USA
Umugqa wokukhiqiza uswidi we-GDQ600
I-GDQ600 umugqa wamaswidi we-jelly othomathikhi ngokuphelele
I-GDQ600 umugqa we-jelly othomathikhi ngokugcwele
Umugqa wediphozi kamaskandi we-GDQ450
GDQ450 Jelly uswidi wediphozi umugqa
Umugqa wediphozithi we-GDQ300 Jelly
GDQ300 Jelly uswidi wokufaka imali kamaskandi
Umugqa wediphozi kamaskandi we-GDQ150
GDQ150 Jelly uswidi wediphozi umugqa
Umshini we-Gummy bear, i-gummy bear depositor
Lo mugqa wenzelwa ukwenza ibhere le-gummy ngesikhunta esiboshwe nge-non-starch Teflon.